Saaxiib iyo sayid hal abuur leh oo dhan waxa la podcasting waa Jen Edds ka Shirkadda Brassy Broadcasting. Marar badan ma arko iyada, laakiin markaan sameeyo had iyo jeer waa qosol badan. Jen waa shaqsi karti badan - way qosol badan tahay, iyadu waa muusikiiste karti iyo heesaa leh, waana mid ka mid ah kuwa ugu khibradda badan Podcasters-ka aan ogahay Marka, layaab maleh markay ila wadaagtay qalab cusub oo laga yaabo inay dan kuu tahay dadweynow - Zencastr.
Haddii aad tahay podcaster halyeey ah, fursadaha ayaa ah inaad leedahay a guddiga fiicni iyo makarafoono aad u tiro badan iyo sameecado. Haddii aad tahay podcaster cusub, waxaad yeelan kartaa a fiicni digital. Kakanaanta ayaa bilaabmaysa markaad rabto inaad keensato marti fog. Waxaan diyaarinay kuweena Istuudiyaha 'Indianapolis Podcast' oo leh Mac Mini iyo laba isdhexgal maqal USB ah si loo soo saaro Skype ama maqal kasta oo kale oo loogu daro qaskeena.
Intaas oo ay xallinayso tikniyoolajiyadda, markaa waa inaad xarig-miiraha isku-darkaaga ama barnaamijkaaga isku-darka dijitaalka ah si aad ugu soo saartaan dadkaaga istuudiyaha ah baska u baxa dadkiinna internetka. Oo waa inaad hubisaa inaadan dib u dhigin codka martidaada haddii kale, martidaada internetka ayaa maqli doonta dhawaq. Kaliya arrimahaas ma lihid, laakiin barnaamijyo badan oo isgaarsiineed oo khadka tooska ah ah (sida Skype) ayaa codka hoos u dhigaya. Waxay la mid tahay maqalka qof wacaya raadiyaha taleefankooda.
Ku diiwaangeli WAV aan khasaaro lahayn - Ha u tanaasulin tayada. Zencastr waxay ku duubtaa martidaada 16-bit 44.1k WAV oo bilaa khasaaro ah si aad u hesho codka ugu fiican ee suurtogalka ah inaad la shaqeyso.